vivo Y31丨vivo Myanmar
ကျယ်ပြန့်သော ဖုန်းမျက်နှာပြင်သည် မျက်လုံးကိုထိခိုက်စေသည့် အန္တရာယ်ရှိသော အပြာရောင် အလင်းတန်းများကို ကာကွယ်ပေးပြီး ဗီဒီယိုကြည့်ရှုရန်နှင့် ဂိမ်းတွေကစားရန်အတွက် စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော ခံစားချက်ကိုပေးသည်။
တလက်လက် တောက်ပသော 3D အရောင်များ
စွဲမက်ဖွယ်အနက်ရောင်၏ နက်ရှိုင်းသောခွန်အားကို ခံစားလိုက်ပါ။
အပူပိုင်းဒေသ သမုဒ္ဒရာအရောင်ကနေရရှိလာသော စိတ်ကူးဖြစ်ပြီး ငယ်ရွယ်နုပျိုတက်ကြွမှုကို ခံစားလိုက်ပါ။
ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကို ဖွင့်ပြီး တချိန်တည်းမှာ သင့်ဖုန်းကို lock ဖြည်လိုက်ပါ။
ဖုန်း screen lock ဖွင့်ရန် ကြာချိန်မှာ အံ့ဩဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် ၀.၃ စက္ကန့်သာ ရှိသည်။
နောက်တစ်နည်းမှာ တစက္ကန့်တောင်မကြာပဲ ဖုန်းကိုကောက်ကိုင်ကြည့်ရင်း Face wake ဖြင့်ဖုန်း lock ကို ဖြည်လိုက်ပါ။
Y31 သည် Application များစွာကို အခက်အခဲမရှိဘဲ အသုံးပြုနိုင်သည်။
ပိုထူးခြားသည်မှာ ကဒ် ၃ ကဒ်ထည့်နိုင်သော ဒီဇိုင်းသည် memory ပမာဏကို 1TB အထိ တိုးချဲ့အသုံးပြုနိုင်သော အချက်ပါဝင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဖုန်းကို စိတ်ကြိုက်အသုံးပြုပါ။
၆၄ မိနစ်အတွင်း ဖုန်းအားကို ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ သွင်းနိုင်သည်။
AI စွမ်းအင် ချွေတာသည့်နည်းပညာဖြင့် တစ်ကြိမ်အပြည့်အ၀အားသွင်းမှုသည် အွန်လိုင်းတွင် ၁၇.၉ နာရီကြာ video ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး ဂိမ်းများကိုလဲ ၉.၉ နာရီကြာ ကစားနိုင်သည်။
Y31 ၏ Reverse Charging Power ဖြင့် သင်၏အခြား အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများကို အားသွင်းနိုင်သည်။
AI Triple ကင်မရာ
Shooting Modes များစွာ ထည့်သွင်းထားသောကြောင့် AI Triple Camera သည် နေ့ညမရွေး ဓာတ်ပုံများကို ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ
ရိုက်ကူးနိုင်သည်။ Y31 ဖြင့် သင်၏ အဖိုးမဖြတ်နိုင်သော အခိုက်အတန့်များကို မှတ်တမ်းတင်လိုက်ပါ။
ဓာတ်ပုံများသည် အသက်ဝင်နေရုံမက သာမန်ဓာတ်ပုံများထက် ပိုမို ကြည်လင်ပြတ်သားမှုကို ရရှိစေသည်။
သင်၏မျက်လုံးများဖြင့် မမြင်နိုင်သော ကမ္ဘာကြီး၏ အံ့ဩဖွယ် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အခိုက်အတန့်လေးများကို ၄ စင်တီမီတာထိ နီးကပ်နိုင်သော focus ဖြင့် ရှာဖွေလိုက်ပါ။
Super Night ကင်မရာ
Super Night Mode အလင်းရောင်နည်းသည့်အချိန်များတွင်ပင် လှပသောညပုံရိပ်များကို ဖမ်းယူနိုင်သည်။
Super Night Mode (နောက်ကင်မရာ) သည်သင့်ဓာတ်ပုံများ၏ ကြည်လင်ပြတ်သားမှုအတွက် multi-frame noise reduction algorithm ကို အသုံးပြုထားသည်။ အလင်းရောင်နည်းသည့်အခြေအနေများတွင်ပင် လှပသောညပုံရိပ်များကို ဖမ်းယူလိုက်ပါ။ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် ကြယ်တာရာများနှင့် ညကောင်းကင်ပုံရိပ်ကို ဖမ်းယူရန် ဖုန်းမျက်နှာပြင်ပေါ် တစ်ချက်ပုတ်ရုံဖြင့် မီးထိုးဖမ်းယူပါ။ ဓါတ်ပုံပညာရှင်များမှ ဒီဇိုင်းဆွဲထားသည့် ရွေးချယ်စရာ Stylish Night Filter လေးခုတို့ ပါရှိပါသည်။
Electronic Image Stabilization (EIS) သည် ပြေးနေစဉ် စက်ဘီးစီးနေစဉ် အဝေးမှလူ အများနှင့် ရှုခင်းများကို video ရိုက်ကူးနိုင်သည်။
သည် သီချင်း၊ ဖုန်းသံများမှစပြီး ဗီဒီယို၊ ရုပ်ရှင်တွေအထိ သင်နားသောတဆင်လိုတဲ့ အရာတွေကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
Bass dust ကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် 73 dB အထိ အသံထုတ်လွှင့်ရန် အသံချဲ့စက်၏ပမာဏနှင့်ညီမျှသွားစေသည်။ ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ထူးခြားသော Super Audio အသံစနစ်ကိုများကို ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီး သင်၏အသံအတွေ့အကြုံကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ခံစားရမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Multi-Turbo 4.0 သည် ဂိမ်းဆော့ရာတွင် ထစ်ငေါ့ခြင်းနှင့်နှောင့်နှေးခြင်းများကို လျှော့ချရန် အဓိကမြင်ကွင်းများကို အကောင်းဆုံးအာရုံစိုက်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် CPU နှင့် internal သိုလှောင်မှုအရင်းအမြစ်များကို အထူးသဖြင့်နောက်ခံတွင်တစ်ပြိုင်နက်တည်း လည်ပတ်နေသည့်အချိန်တွင်လည်း ခွဲဝေသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ဦးစားပေးခြင်းပြုလုပ်ရန်အတွက် စီမံထားသည်။
ဓာတ်ပုံပေါ်တွင် watermark ကို သင့်စိတ်ကြိုက် ဖန်တီးပြုလုပ်ပါ။
သည် သင့်အားစတိုင်ကျသော ဗီဒီယိုများဖန်တီးရန်နှင့် လူမှုမီဒီယာတွင် အလွယ်တကူ မျှဝေနိုင်သည်။
က သင်၏ဓါတ်ပုံများကို အချိန်၊ တည်နေရာနှင့်အဖြစ်အပျက်များအရ စုစည်းပေးသည်။
စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသော iManager သည် vivo အသုံးပြုသူများကို ပျင်းစရာကောင်းသော နေ့စဉ်အလုပ်များမှလွတ်မြောက်စေသည်။
သင်၏ဖုန်းကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ညအချိန်တွင်ပြဿနာများကို စစ်ဆေးခြင်းစသည့်လုပ်ငန်းများကို ဂရုစိုက်ရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။
ညအိပ်အနားယူချိန်၌ iManager သည်သင်၏ဖုန်းတွင်းလုပ်ဆောင်ချက်တို့ကို ကောင်းမွန်စေသည်။
1. အန္တရာယ်ရှိသော အပြာရောင် အလင်းတန်းများကို ကာကွယ်ပေးသော လုပ်ဆောင်ချက်ကိုပေးရန်အတွက် Eye Protection Mode ကို on ရန် လိုအပ်ပါသည်။
2. ၀.၃ စက္ကန့်ဆိုသည်မှာ vivo လက်တွေ့စမ်းသပ်ခန်းတွင် side-mounted fingerprint screen နှင့်စမ်းသပ်၍ lock ဖြည်ထားသော ကြာချိန်ဖြစ်သည်။ Screen ဖွင့်ထားစဉ် lock ဖြည်ရန် ကြာချိန်မှာ ၀.၃ စက္ကန့်ဖြစ်ပြီး screen ပိတ်ထားစဉ်တွင် ၀.၄၄ စက္ကန့်သာ ကြာသည်။ လက်တွေ့အသုံးပြုသောအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ကြာချိန်မှာ ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်သည်။
3. memory ပမာဏကို 1TB အထိ တိုးချဲ့အသုံးပြုနိုင်သော အချက်ပါဝင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဖုန်းကို စိတ်ကြိုက်အသုံးပြုပါ။ memory ပမာဏကို 1TB အထိ တိုးချဲ့အသုံးပြုနိုင်ပြီး Micro SD Card ကို သီးခြားထပ်မံဝယ်ယူရန် လိုအပ်သည်။
4. RAM/ROM ၏ အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်သည် ဖုန်းတွင်း ဆောင်ရွက်မှုစနစ်နှင့် ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသော application များ၏ သိုလှောင်မှုကြောင့် လျော့ကျနိုင်သည်။
6. Y31 တွင် vivo Standard Charger (Fast Charge Adapter 9V/2A) ပါရှိပြီး 18W အထိ ထောက်ပံ့နိုင်သည်။ အမှန်တကယ်အားသွင်းနိုင်စွမ်းသည် မြင်ကွင်းအပြောင်းအလဲနှင့် လက်တွေ့အသုံးပြုမှုအခြေအနေအလိုက် ချိန်ညှိသောစနစ်ပါဝင်သည်။
7. Reverse Charging အတွက် OTG Cable ကို သီးခြားထပ်မံဝယ်ယူရန် လိုအပ်သည်။
8. Y31 ၏ အားသွင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအချက်အလက်ကို vivo လက်တွေ့စမ်းသပ်ခန်းများမှ ရရှိသည်။
9. Y31 ရဲ့အားသွင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များသည် vivo ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုများမှ ရရှိထားခြင်းဖြစ်သည်။ စမ်းသပ်ခန်းအပူချိန် 25 ℃± ။
10. စမ်းသပ်မှုအခြေအနေ ဘက်ထရီပမာ ၁%တွင် ၊ မျက်နှာပြင်ပိတ်ခြင်းနှင့် Vivo စံပြု အားသွင်းစက်တို့ ပါရှိသည်။ အထက်ပါအချက်အလက်တို့သည် ပုံသေမရှိကြသော စမ်းသပ်ခန်းပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများ၊ ရေရှည်ဘက်ထရီအသုံးပြုမှုနှင့် အခြားအချက်များအပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။
11. အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားချိန်: စွမ်းအားပြည့်အပြည့်ဖြင့် WIFI ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှု၊ ၁၅၀cd / m²ဖန်သားပြင်တောက်ပမှုနှင့် 63dB (A) အသံအတိုးအကျယ်ရှိ၍ Y31 သည်ပုံမှန်ဂိမ်းချိန်ညှိမှုများနှင့် PUBG ကို ၉.၉ နာရီကြာ ဆက်တိုက်ကစားနိုင်သည်။ အမှန်တကယ်ဂိမ်းကစားချိန်သည် အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။
12. အွန်လိုင်းဗွီဒီယို streaming အချိန် - ပါဝါအပြည့်ဖြင့် WIFI ကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှု၊ 150cd / m²ဖန်သားပြင်တောက်ပမှုနှင့် 63dB (A) volume တို့ဖြင့် Y31 သည် YouTube ဗီဒီယိုများကို ၁၇.၉ နာရီကြာ ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ အွန်လိုင်းတွင် အမှန်တကယ်ကစားသော အချိန်သည် အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။
13. *48MP ဓါတ်ပုံများအတွက် High Resolution mode ကို ဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။
14. Ultra Stable Video ကို အသုံးပြုရိုက်ကူးနေစဉ်တွင် preview mode မရနိုင်ပါ။
15. SPL (အသံဖိအားအဆင့်) သည် vivo ၏ဓာတ်ခွဲခန်းမှ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုအပေါ်အခြေခံထားပါသည်။ စမ်းသပ်မှုပတ်၀န်းကျင် - ပတ်ဝန်းကျင်ဆူညံသံသည် ၂၀ ဒီဂရီထက်နည်းသော အသံတိတ်အခန်း၊ စမ်းသပ်မှုအခြေအနေ - အသံမီတာကို ၃၀ စင်တီမီတာအကွာအဝေးကို မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့်ချပြီး LAeq တန်ဖိုးကိုမှတ်တမ်းတင်ရန် ၎င်း၏ဖန်သားပြင်၏ ဗဟိုဆီသို့ထားပါ။ ဂီတမြင်ကွင်းတွင်သီချင်း ၅ ပုဒ်ကိုစစ်ဆေးပြီး ပျမ်းမျှ SPL သည် ၇၁.၃၂ dB (A)၊ Mcdull ကို ဗီဒီယိုဇာတ်လမ်းဖြ င့်ကစားပါ။ SPL သည် ၆၈.၇ dB (A)၊ ပုံမှန် ringtone ကို ringtone မြင်ကွင်းတွင်ဖွင့်ပါ။ ၎င်းသည် SPL သည် 73 dB (A) ဖြစ်သည်။
16. မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားမှာ ထောင့်ဖြတ် တိုင်းတာထားခြင်း ဖြစ်သည့်အတွက် ထောင့်မှန်အပြည့်မှာ ၆.၅၈ လက်မဖြစ်ပြီး ထောင့်ချိုးအကွေးများ ထည့်သွင်းတိုင်းတာပါက အနည်းငယ် သေးငယ်သည်။
17. ယခု ပါဝင်သော ပုံသည် ကိုးကားရန်အတွက်သာ ဖြစ်ပြီး display screen ပေါ်တွင် ပြထားသည့် ဓာတ်ပုံသည် ပုံဖော်ပြသရန် ရည်ရွယ်၍ ကိုယ်တိုင် တီထွင်ထားသည့် ဓာတ်ပုံ ဖြစ်ပါသည်။ စံထားရှိထားသည့် ပြင်ပဓာတ်ပုံများကို ရယူနိုင်ပါသည်။
18. ယခု ဖော်ပြထားသည့် အချက်အလက်အားလုံးသည် ဒီဇိုင်းပညာရှင် တိုင်းတာသူများ၊ သုသေသန စမ်းသပ်စစ်ဆေးချက် ရလဒ်များနှင့် supplier များ စမ်းသပ်စစ်ဆေးထားသည့် အချက်အလက်များကို အခြေခံပြီး ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ လက်တွေ့ စွမ်းဆောင်ရည်သည် software version ၊ specific test environment နှင့် phone model များအပေါ် မူတည်ပြီး ကွဲလွဲသွားနိုင်ပါသည်။
19. ထုတ်ကုန်လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ဖော်ပြချက်များသည် vivo မှ ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် အချိန်မရွေး ပြန်လည် ပြင်ဆင်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ချက်များကို ကြိုတင်အသိပေး အကြောင်းကြားခြင်း ပြုလုပ်မည် မဟုတ်ပါ။